Fomba 3 ny marketing organika afaka manampy anao hanararaotra ny teti-bolanao amin'ny taona 2022 | Martech Zone
Fomba 3 ahafahan'ny marketing organika manampy anao hanararaotra ny tetibolao amin'ny taona 2022
Alakamisy Febroary 3, 2022 Alakamisy Febroary 3, 2022 Lindsay Boyajian Hagan
Ny teti-bolan'ny marketing dia nilatsaka ho 6% amin'ny fidiram-bolan'ny orinasa tamin'ny taona 2021, nidina tamin'ny 11% tamin'ny taona 2020.
Gartner, Ny fanadihadiana isan-taona momba ny fandaniana CMO 2021
Miaraka amin'ny andrasana ambony toy ny taloha, izao no fotoana ho an'ny mpivarotra hanatsara ny fandaniana sy hanitarana ny dolara.
Satria ny orinasa dia manome loharanon-karena vitsy kokoa ho an'ny varotra-saingy mbola mitaky fiverenana ambony amin'ny ROI-dia tsy mahagaga raha mitombo ny fandaniana ara-barotra organika raha ampitahaina amin'ny fandaniana doka. Ezaka ara-barotra ara-boajanahary toy ny fanatsarana ny milina fikarohana (SEO) mirona ho lafo kokoa noho ny doka voaloa. Manohy manome vokatra izy ireo na dia efa nitsahatra ny fandaniana aza ny mpivarotra. Raha tsorina, ny marketing organika dia fampiasam-bola hendry mba hiarovana amin'ny fiovaovan'ny tetibola tsy azo ihodivirana.
Inona àry ny raikipohy? Mba hahazoana tombony betsaka amin'ny teti-bolanao sy hanatsarana ny hetsika ara-barotra organika, mila paikady isan-karazany ny mpivarotra. Miaraka amin'ny fifangaroana mety amin'ny fantsona-ary miaraka amin'ny SEO sy ny fiaraha-miasa ho ivon'ny fifantohana-dia azonao atao ny manangana ny fitokisan'ny mpanjifa sy mitondra vola miditra.
Nahoana ny Marketing Organic?
Matetika ny mpivarotra no mahatsapa fanerena hamoaka vokatra eo no ho eo, izay azon'ny doka karamaina. Na dia mety tsy hanampy anao hahatratra ROI haingana toy ny doka karama aza ny fikarohana organika, dia mandray anjara amin'izany mihoatra ny antsasa-manilan'ny fifamoivoizana amin'ny tranokala azo zahana ary mitaona saika 40% amin'ny fividianana rehetra. Ny fikarohana organika dia mpamily maharitra amin'ny fahombiazan'ny varotra izay tena ilaina amin'ny fitomboan'ny orinasa.
Ny paikadin'ny fitomboana organika koa dia manome fahafahana ho an'ny mpivarotra hanorina fifandraisana maharitra amin'ny mpanjifa. Rehefa avy nametraka fanontaniana tao amin'ny Google, 74% ny mpanjifa midira avy hatrany ny doka karama taloha ary miantehitra amin'ny vokatra organika azo itokisana kokoa hamaliana ny fanontaniany. Tsy mandainga ny angona — ny valin'ny fikarohana organika dia mitondra fifamoivoizana betsaka kokoa noho ny doka voaloa.
Ankoatra ny tombotsoan'ny fanentanana ny marika sy ny fahatokisan'ny mpanjifa, ny varotra organika dia tena mandaitra. Tsy toy ny doka voaloa, tsy mila mandoa vola amin'ny fametrahana media ianao. Ny vidin'ny varotra organika dia ny teknolojia sy ny isan'ny olona. Ny programa ara-barotra organika tsara indrindra dia tarihin'ny ekipa ao an-trano, ary mampiasa teknolojian'ny orinasa izy ireo.
Ny doka karama dia tsy zavatra taloha, fa ny varotra organika dia ampahany lehibe amin'ny ho avy. Zava-dehibe indrindra izany toy ny Mikasa ny hanaisotra cookies avy amin'ny antoko fahatelo i Google amin'ny 2023, mampihena ny fahombiazan'ny doka karama. Amin'ny fampidirana ireo hetsika organika toa ny SEO ao amin'ny drafitry ny varotrao, dia mety hahatratra ny tanjon'ny orinasa ianao ary hahatratra ROI ambony kokoa.
Hatsarao ny paikady ara-barotra organika amin'ny 2022
Ny sanda omen'ny marketing organika dia mahatonga azy ho fitaovana mahery vaika, indrindra ho an'ireo fikambanana manana teti-bola voafetra. Saingy ny fitomboana organika dia mahomby amin'ny paikady mety. Mba hamaritana hoe aiza no laharam-pahamehan'ny varotra amin'ny 2022, Conductor nanadihady mpivarotra maherin'ny 350 mba hianatra momba ny drafitra ho an'ny taona sy hamantatra ny fironana amin'ny fandaniana.
Ary, araka ny fanadihadiana, ny laharam-pahamehana ho an'ny mpitarika nomerika mandritra ny 12 volana ho avy dia ahitana ny traikefan'ny mpampiasa tranonkala (UX), varotra votoaty, ary fiaraha-miasa matanjaka kokoa eo amin'ny ekipa.
Miaraka amin'izany ao an-tsaina, ity no fomba ahafahanao mitondra ny hetsikao mankany amin'ny ambaratonga manaraka ary mahazo tombony betsaka amin'ny teti-bola ara-barotra:
Ampiasao ny herin'ny SEO. Ny varotra mahomby dia manome votoaty mamaly ny fanontaniany ho an'ny mpikaroka—izay antsointsika hoe mpanjifa-voalohany marketing. Satria samy B2B ary B2C Matetika ny mpanapa-kevitra dia manomboka ny diany mividy amin'ny fikarohana azy manokana, mendrika ny hampiasa vola amin'ny SEO. Saingy tsy hampitombo ny laharan'ny fikarohana ny famenoana teny fototra. Ataovy laharam-pahamehana ny fikarohana teny fototra sy ny fanaraha-maso ara-teknika mba hahazoana antoka fa ny milina fikarohana dia afaka manitsy tsara ny votoatin'ny tranokala.
Mba hanamafisana ny fiantraikany, mampiasa vola amin'ny sehatra ara-barotra organika sy ao amin'ny ekipa SEO ao an-trano mba hiantohana ny tsy fitovian'ny orinasa amin'ny atiny manerana ny fantsona miaraka amin'ny paikady SEO.
Miara-miasa ho an'ny UX tena tsara. Araka ny Hafanàm-po an mpitarika, ny fitazonana UX tsara ho an'ny tranokalan'ny marikao dia zava-dehibe indrindra amin'ny 2022-saingy tsy azo atao izany raha tsy misy fiaraha-miasa. Ny mpiasa ao amin'ny tranonkala, SEO, ary ny andraikitry ny atiny dia nahita ny olona amin'ny andraikitra hafa ho miara-miasa latsaky ny 50% ny time. Ity fanapahana ity dia mety hiteraka asa dika mitovy, bottleneck ary fomba fanao SEO tsy mifanaraka. Ny fandraisana andraikitra UX mahomby dia misy fifandraisana tsy tapaka eo amin'ny sampan-draharaha, manasongadina ny ilàna ny fandravana ny silo fandaminana. Bonus fanampiny miaraka amin'ny UX tena tsara? izany manatsara ny laharan'ny fikarohanao Google.
Fandrefesana ny vokatra. Lohahevitra mahazatra hitanay ny fanadihadiana dia ny filàna fandrefesana ny fahombiazan'ny programa SEO amin'ny taona 2022. Ny fanombanana tsy tapaka ny fahombiazan'ny teknolojia sy ny fanao SEO dia afaka mampahafantatra ny laharam-pahamehanao.
Manaova soa ho anao: Talohan'ny amin'ny fampiharana ny programa SEO anao, fantaro izay metrika hojerenao (ohatra, ny fifamoivoizana, ny laharan'ny teny fanalahidy, ary ny fizarana tsena) ary ny fomba handrefesanao valiny. Izany dia ahafahanao manatsara ny atiny ary manao laharam-pahamehana ireo hetsika mahomby indrindra — mitsitsy fotoana sy vola.
Ny teti-bolan'ny varotra mihena dia tsy voatery midika hoe drafitra ara-barotra ambany kalitao ho an'ny 2022 — mila manatsara ny loharanonao fotsiny ianao. Miaraka amin'ny paikady matanjaka sy fifantohana amin'ny varotra organika, azonao atao ny manangana ny fahatokisan'ny mpanjifa sy ny fahatsiarovan-tena amin'ny marika rehefa mitondra fidiram-bola.
Liana hianatra bebe kokoa? Jereo ny tatitra farany nataon'ny Conductor:
Ny State of Organic Marketing tamin'ny 2022
Tags: 202020212022fanadihadiana momba ny fandaniana cmo isan-taonampitarikagartnertetibola marketingpaikady fitomboana organikavarotra biolojikavarotra fikarohana organikafiverenana amin'ny fampiasam-bola amin'ny marketingromifikarohana OptimizationfikarohanaSEOtoetry ny varotra organikaux
Lindsay Boyajian Hagan dia VP amin'ny Marketing ao mpitarika, miresaka momba ny fomba ahafahan'ny orinasa mamorona paikady ara-barotra nomerika omnichannel, ary tsy mifantoka amin'ny fantsona tokana mitokana. Izy koa dia miditra lalina amin'ny antony mitombo ny fampiasam-bola ara-barotra organika sy ny maha-zava-dehibe izany amin'ny indostria.